Vakashela eDolobheni Elithandekayo laseCuenca | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, Impelasonto, General
Namuhla sizokhuluma nge-a indawo efanelekile ukuvakasha noma ukubaleka eCuenca. Sibhekisa eDolobheni Elithandekayo laseCuenca, indawo evame ukuvakashelwa yimindeni noma amaqembu wabangane nemibhangqwana. Ilungele bonke labo abathanda ukuthola izindawo ezifihliwe emvelweni ezinobuhle obukhulu.
Uma kukhona okuthile okuvelele kufayela le- Idolobha elijabulisayo laseCuenca yizimo zamatshe, ebunjiwe kuphela isenzo somoya namanzi emvula neqhwa. Lokhu kuholele ekwakhekeni kwamadwala ayingqayizivele futhi amangalisayo. Ungaphuthelwa yiyo yonke imininingwane okufanele uyazi lapho uvakashela i-Enchanted City eCuenca.
1 Ungafika kanjani lapho usuka eCuenca
2 Imininingwane epaki yezivakashi
3 Yini ongayibona eDolobheni eliCwebile laseCuenca
Ungafika kanjani lapho usuka eCuenca
I-Enchanted City ivame ukuvakashelwa uma siseCuenca, njengengxenye yalolu hambo. Kusuka ku-akhawunti kufanele uthathe ifayela le- County road CM2105 kanye ne-CM2104 lokho kusisa kule ndawo yemvelo. Itholakala edolobheni laseValdecabras, maphakathi neSerranía de Cuenca. Kungenzeka kuhlelwe ezinye izindlela zokuhamba ngebhasi ukusuka eCuenca, yize kujwayelekile ukuthi abantu basebenzise imoto eqashisayo noma eyabo ukufika lapho. Idolobha liku-CM2104 km 19, cishe amakhilomitha angama-30 ukusuka eCuenca.
Imininingwane epaki yezivakashi
El isheduli yepaki yoMuzi Ochazekile waseCuenca Kuvamise ukuthi kungaphazanyiswa kusukela ngo-10 ekuseni kuye ku-18, 19 noma ngo-20 ntambama, kuye ngesikhathi sonyaka nangesikhathi ilanga lishona ngalo. Akumele sikhohlwe ukuthi sizozithola sisesimweni esingokwemvelo esingasazi, ngakho-ke yizinyathelo zokuqapha ezeqisayo. Ngakolunye uhlangothi, ngaso sonke isikhathi kufanele ufunde izinguquko ezingaba khona kanye nezinkomba kanye nezinyathelo zokuphepha kwiwebhusayithi yabo, lapho besitshela khona, ngokwesibonelo, ngesifo sabashayeli bezindwendwe esikhona ngalesi sikhathi okungcono ukungalethi izilwane ezifuywayo, ngoba kuyisilwane esiyingozi kakhulu ezinjeni. Ngaphezu kwalokho, kufanele uhlale ubheka umbiko wesimo sezulu bese uthola ngaphambi kokuhamba, ngoba isimo sezulu esibi singadala ukuthi ipaki lihlale livaliwe ngalolo suku.
Uma kukhulunywa ngokuthola ithikithi, kufanele sazi ukuthi ithengwa ngqo ebhokisini lehhovisi, ngoba abanakho ukuthengisa oku-inthanethi noma ukubhuka. Kungenzeka ukuletha izilwane ezifuywayo futhi imali yokungena ingama-euro ayisihlanu ngomuntu ngamunye. Endabeni yezingane, abahola impesheni kanye nemindeni emikhulu, inani lizoba ngama-euro amane. Uma senza uhambo oluqondisiwe kungama-euro ayisithupha. Sihlala sincoma ukuthi uhlole intengo kuwebhu ngaphambili www.ciudadencantada.es ukuqinisekisa ukuthi akukho zinguquko. Umzila awulungele abantu abanokuhamba okuncishisiwe noma amakalishi ezingane. Kuyindlela ye- umzila oyisiyingi wamakhilomitha angaba ngu-3 othatha ihora nohhafu cishe. Kumele sihloniphe umzila kanye nemithetho, okungukuthi, siqoqe izitulo zenja nokuthi iboshelwe kulo lonke uhambo, ngaphezu kokusebenzisa imigqomo ukulahla noma yini. Kumele sinakekele izindawo zemvelo noma ngabe sikuphi.
Yini ongayibona eDolobheni eliCwebile laseCuenca
Lapho wenza lolu hambo, landela amabhekhoni aluhlaza okwesibhakabhaka, akhomba indlela yokuphuma, futhi ama-rose abuyele emuva. Kuhlelo walk uzobona ukwakheka, okune-morphology ehlukile, ukwakheka kwamakhemikhali nobulukhuni, ekugcineni ezinikeza lezi zinhlobo ezahlukahlukene zokuvumela umcabango wazo ugijime. Ngamadwala emikhumbi sizobona eminye imikhumbi emikhulu itheku ethekwini, uphawu lubonakala luphumule, iTormo yidwala eliqala, libanzi phezulu ngaphezu kwesisekelo. Sizophinda futhi sithole nengwenya ebukeka ibhekene nendlovu, ubuso obuyindida bendoda phakathi kwehlathi likaphayini, amanye amabhere, ulwandle lwangempela lwetshe, ibhuloho lamatshe noma umnyango wesigodlo, nesimo salo somlomo , okubonakala sengathi kwenziwe isenzo somuntu. Enye yezinto ezijabulisa kakhulu izingane isethi yamatshe eyaziwa ngokuthi isilayidi, esendleleni ewumngcingo lapho wehla wenyuka khona lapho uhamba ngayo, yingakho igama layo.
Uma uma sifika edwaleni sizibuza ukuthi kungenzeka ukuthi ibukeka kanjani ngoba asikwazi ukubona ngeso lengqondo ukuma, akunankinga, ngoba ngamunye ine-lectern lapho konke kuchazwa khona. Luhambo olungenziwa ngomoya ophansi, ukujabulela ukuthatha izithombe nokubabaza umphumela wemvelo emadwaleni. Kulabo abafuna ukwazi leli dolobha ngokuphelele, bangahlala njalo bekhetha ukuvakasha okuqondiswayo, ukuze bazi yonke imininingwane yazo zonke izindlela zokwakheka kwamatshe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Vakashela eMadolobheni Enchanted eCuenca